Liiska DOWLAD wanaagga dalalka Afrika oo soo baxay (Somalia kaalintee gashay?) - Caasimada Online
Home Warar Liiska DOWLAD wanaagga dalalka Afrika oo soo baxay (Somalia kaalintee gashay?)
Liiska DOWLAD wanaagga dalalka Afrika oo soo baxay (Somalia kaalintee gashay?)
Muqdisho (Caasimada Online) Soomaaliya ayaa gashay kaalinta ugu dambeysa ee dalka 54aad ee qiyaas dowlad wanaagga ee loo sameeyey qaaradda Afrika, sidaasi waxaa lagu sheegay cilmi-baarista Mo Ibrahim 2018 Index of African Governance.
Inkastoo Soomaaliya ay mar kale ugu hoos martay qiimeynta sannad laha ah ee dalalka qaaradda Afrika haddana waxaa soo baxday ifafaalo rajo weyn gelinaysa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed.
Warbixinta sanadlaha ah ee ay soo saareen khubrada cilmi barista Hay’adda MO Ibrahim oo ka mid ah daraasadaha ugu muhiimsan ee laga sameeyo hoggaan wanaagga Afrika ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay heshay dhibcihii ugu badnaa tan iyo sanadkii 2006-dii xilligaas oo la asaasay hay’addan fadhigoodu yahay dalalka Senegal iyo UK.
Dhibcahan oo lagu muujiyo heerka dal kasta uu ka xaqiijiyey sanadkii tagay arrimaha Maamul Wanaagga, ladagaalanka musuqmaasuqa, kobaca dhaqaalaha, ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo horumarinta bulshada ayaa la sheegay in Soomaaliya ay sanadkii tagay ee 2017 ay korosatay 2.5 dhibcood oo ah tiro ka badan dhibcihii ay gaartay dowladdii hore ee Madaxweyne Xasan Sheekh 4-tii sano ee ay xukunka haysay.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in Nabad iyo Nolol ay hal sano ku kordhisay dhibcaha dowladnimada Soomaaliya 2.5 halka muddadii 4-tii sano ahayd oo dhan ay dowladdi hore keentay 2.0 oo kaliya.
Soomaaliya ayaa noqotay dalka labaad ee liiska dalalka ugu xawaaraha badan dhanka horumarka qaaradda Africa, maadaama sanadkii tagay oo qura ay soo kordhisay 2.5 dhibcood ee cabirka horumarka, taas oo ka dhigan in ay liiskan ku hoggaaminayso dalal gaamuray sida Masar, Every-Cost, Ghana iyo Burundi oo ciidamadeedu ay nabad ilaalin u joogaan Soomaaliya.
Arrimaha warbixintu ay Dowladda Soomaaliya ku ammaantay sanadkan waxaa ugu horreeya (public management) maamulka guud ee dalka oo tan iyo sanadkii 2008-dii ilaa 2016kii lagu qiyaasi jiray 2.9 oo kaliya ayaa haatan gaaray 10.9, kobcinta dhaqaalaha 7.4 dhibcood, Ilaalinta Xuquuqda Aadanaha oo dowladdu ay xaqiijisay 18.3 dhibcood, horumarinta bulshada 16.4 dhibcood, iyo amniga qaranka oo dadaalladii la sameeyey ee Golaha Amniga Qaranka ay sababtay in la siiyo Soomaaliya 17.1 dhibcood.
Ugu danbayntii waxaa xusid mudan in guulahan taariikhiga ah ee Soomaaliya ay ku talaabsatay sanadkii la soo dhaafay aysan suurta gelin in ay ka baxdo kaalinta 54-aad ee ugu danbeysay liiska guud ee dowladnimada dalalka qaaradda Afrika, maadaama uu dalku ku jiray colaad sokeeye iyo dowlad la’aan muddo dheer.